जेठाजुले विभत्स हत्या गरेको अञ्जनाकी बहिनी रूँदै भन्छिन् – दिदीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर मार्दा कति दुख्यो होला, घाँटी रेटेको छ हात चुँडिएको छ (भिडियो सहित) - Mero Khabar Nepal
जेठाजुले विभत्स हत्या गरेको अञ्जनाकी बहिनी रूँदै भन्छिन् – दिदीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर मार्दा कति दुख्यो होला, घाँटी रेटेको छ हात चुँडिएको छ (भिडियो सहित)
गत बिहीबार जेठाजु उज्वल महतले दिउँसो २५ वर्षीय बुहारी अञ्जना महतमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्यो । उनले आफ्नै बुहारीलाई निर्ममतापूर्वक विभत्स हत्या गरेपछि हातमा रगत लतपतिएको नाङ्गो खुकुरी बोकेर आमालाई मैले बुहारीलाई मारें, प्रहरी बोलाई दिनुस् भन्छ। करोडौं नेपालीहरुकोको मन जितेको ‘सुन साइली’ बोलको गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गरेका उज्वल महत र भाई बुहारीसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर नै देखिन्छ। जुन कुरा उनका आमाबाबुद्वारा अन्य भिडियो अन्तरबार्ताहरुमा भनेका छन् । तर माईती पक्ष यो मान्न तयार छैनन् । अञ्जनाको हत्यापछि विक्षिप्त उनको माईती, खास गरी बहिनीले “नौलो आवाज” युटुब च्यानलमा पत्रकारसँग रुँदै दिदीको हत्याको बारेमा यस्तो भनेकी छिन् । हेर्नुहोस् बाँकी भिडियोमाः
यो पनि पढ्नुहोस्ः करोडौं नेपालीहरुकोको मन जितेको ‘सुन साइली’ बोलको गीतमा अडियो इन्जिनियरिङ गरेका उज्वल महत माथि बिहीबार गम्भीर आरोप लागेको छ। उनलाई भाइ–बुहारीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । उनले बिहीबार दिउँसो २५ वर्षीय बुहारी अञ्जना महतमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उज्वलले गत मे महिनामाा फेसबुक स्टाटसमा कानको समस्याका कारण अडियो इन्जिनियरिङ नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।उनले पछिल्ला दिनमा आफ्नो फेसबुकमा शंकास्पद क्रियाकलाप देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार अहिलेसम्म सबै मिलेर बसेको बताउँछन्।बिहीबार भाइ अफिस गइसकेपछि उनले बुहारीमाथि नै खुकुरी प्रहार गरे। दिउँसो ब १:३० बजे २५ वर्षीय बुहारी अन्जना लामाको विभत्स हत्या गरे। ‘आमा बुहारी काटेर आएँ, प्रहरी बोलाउनुहोस्’, आमाको भनाइ उद्धृत गर्दै खिउजुले भने।बुहारीलाई काटिसकेपछि उनले खुकुरी बरन्डामा राखेका थिए। बुहारीमाथि खुकुरी प्रहार भएको कोठा पूरै रगतले छोपिएको छ। खिउजुका अनुसार उनको घाँटी छिन्नै लागेको थियो। टाउको र हातमा सयौँ पटक खुकुरी हानेका छन् ।
प्रेमी–प्रमिकाको धन्दा : ५ लाख नदिए गोली हान्ने धम्की
आमा बुवाको लागि छोरी जस्तो छोरा कहिल्यै हुदैनन् ! यो पढ्नुहोस, आँखाबाट आशु झर्ने छ !
पाँचथरमा हत्याकाण्ड : सबैको भयाे यसरी दाहसंस्कार !
भण्डारी रुदै मिडियामा! हामी बचाउँदैछौं, पापीहरु मार्दैछन्(भिडियो
१३ वर्षका बालकको बलात्कार गरेपछी शिक्षिका जेलमा, यस्तो छ घटनाको बिवरण
Prevब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’ ! कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस यस्तो छ तरिका
Nextपाथीभरा माइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल